Shir Looga Hadlayay Dekadaha Soomaaliya Oo Lagu Soo Gabagabeeyay Dalka Ruwanda – Kalfadhi
Magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda ayaa soo lagu gabogabeeyey shir Ku saabsanaa dhismaha hey’adda hormarinta maareynta badaha Soomaaliya kaasoo u dhaxeeyey Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. Waxaana aad looga dooday sharciyada iyo xeerarka ay Ku shaqeyn doonto hey’addaan iyo sidoo kale cidda maamuleysa.
Sidoo kale waxaa shirkaan qayb ka ahaa guddiga arrimaha dekedaha ee baarlamaanka Soomaaliya si ay si dhow ula socdaan dhismaha hey’adaan iyo howlaha loo idmadey iney qabato.
Shirka oo ay soo agaasintay hey’adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha baddaha ee International Maritime Organization ( IMO) ayadoo la kaashaneysa Wasaaradda Dekedaha ee dowladda Federaalka Soomaaliya .
Waxaan shirka ka soo qeyb galay dhammaan wasiiradda dekedaha ee dowlad gobolleedyada, wasiirka dekedaha dowladda federaalka Soomaaliya, iyo xubno ka tirsan guddiga arrimaha dekedaha ee baarlamaanka Soomaaliya .
” Waxaan isku af-garaney dhammaanteen in si degdeg ah loo soo dhiso hey’addaan lagana dhigo waax ka tirsan wasaaradda dekeddaha Ee dowladda federaalka Soomaaliya iskana dhex arkaan xubanaheeda dhamaan maamul goboleedyada ” ayuu yiri wasiir Cabdishakuur Cismaaan oo ah wasiirka dekedaha maamulka hirshabelle oo warbaahinta Kalfadhi la hadlayey .
Waxaa kale oo wasiir uu yiri ” dhisidda hey’adaan waxaa loo xilsaaray wasaaradda dekedaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayadaana soo xuli doonto agaasinka u qalma hoggaaminta hey’addaas”